Haya Bint al-Xuseen: Xaaska amiirka Dubai oo maxkamad UK ku taallo ka dalbatay arrin la yaab leh - BBC News Somali
Image caption Amiirad Haya waxay Imaaraadka ka baxsatay horraanti sanadkan iyada oo hadda ku sugan London
Lahaanshaha sawirka BONGARTS
Image caption Amiirad Haya waxay wax ku soo baratay Jaamacadda Oxford ee dalka Britain
Maxamed bin Raashid wuxuu sannadkii 1949-kii ku dhashay gobolka Shindagha ee Dubai, waana da'da saddexaad ee carruurta afarta ah ee uu dhalay Sheekh Raashid Bin Saciid.
Lahaanshaha sawirka TIM GRAHAM
Maalmihii xigayna waxaa la soo dhisay golo wasiirro oo uu madax ka ayhaay Sheekh Maktoum, wuxuuna walaalkiis u dhiibay wasiirka difaaca, wuxuuna noqday wasiirkii difaaca ee ugu da'da yaraa caalamka ee xilligaas.
Go'aanadii ugu adkaa ee uu qaatay in uu wasiiirka difaaca ahaa waxaa ka mid ahaa in ciidamo Isutagga Imaaraadka ka socda ay ka qayb qaataan xulufadii uu Maraykanku hoggaaminayey ee ciidmada Ciraaq looga saarayey dalka Kuwait sannadkii 1990-kii.
Amiiraddii Imaaraadka "ee baxsatay" Ma lasoo helay?
Sida uu sheegay wargayska Forbes, hantida amiirka Dubai waxay hoos ugu soo dhacday 6 bilyan oo dollar sanaddkii 2009-kii, sababo la xiriira qalalaasihii dhaqaalaha caalamka, waxaana "hantidiisa haatan lagu qiyaasaa 4 bilyan oo dollar" sida laga soo xigtay hay'adda Business Insider.
Muxuu yahay muranka ka dhashay Amiiraddii Imaaraatka ee '' baxsatay''?